मुलुकमै बन्न सक्छ सर्पदंशको औषधि-NepalKanoon.com
मुलुकमै बन्न सक्छ सर्पदंशको औषधि
असार ९, काठमाण्डौ । सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर अघि बढे थोरै लगानीमै सर्पको टोकाइविरुद्धको औषधि (स्नेक एन्टिभेनम) मुलुकमै उत्पा
दन गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । गर्मीयाममा सर्पदंशको प्रभाव बढ्ने गरे पनि तीन वर्षदेखि मुलुकमा सर्पदंशविरुद्ध दिइने औषधिको अभाव छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ।
‘औषधि उत्पादन जटिल प्रक्रिया होइन । मुलुकमा सर्प र घोडा छँदैछन् । एउटा प्लान्ट मात्र किन्ने हो भने सजिलै सर्पदंशविरुद्धको औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘भारतलगायत मुलुकबाट स्नेक एन्टिभेनममा काम गरिसकेका सेवानिवृत्त विशेषज्ञहरूलाई करारमा राखेर विदेशमा समेत निर्यात गर्ने हिसाबले उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ भारतले विश्वका २ सय २ मुलुकमा स्नेक एन्टिभेनम निर्यात गर्दै आएको छ ।
महाशाखाले सर्पको विषप्रतिरोधक उत्पादनसम्बन्धी आधारभूत कामका लागि यस वर्षको बजेटमा २ करोड रुपैयाँ पारिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । इपिडिमियोलजीका डा. जितेन्द्रमान श्रेष्ठले सर्प र घोडाको फार्मका साथै प्लान्ट स्थापना गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ भए पुग्ने बताए ।
फार्म स्थापनाका लागि करिब ३० रोपनी र प्लान्टका लागि जग्गा सरकारले नै उपलब्ध गराए निकै कम लगानी भए पुग्छ । मुलुकभित्र हाल बर्सेनि ३० हजार भाइल भेनम आवश्यक पर्छ । प्लान्ट बनाए योभन्दा बढी परिणाममा भेनम उत्पादन गरी निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ ।
स्नेक एन्टिभेनम मुलुकमै उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा योजना आयोग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खासै चासो नदेखाएको सरोकारवालाले बताए । मुस्ताङ, मनाङमा घोडा फार्म र बर्दिबास, चितवनलगायत ठाउँमा सर्प फार्म खोल्न सकिने जनाउँदै डा. मरासिनीले भने, ‘सरकारलगायत सबै पक्षले सघाए मुलुकमै तीन/चार वर्षभित्र भेनम उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ भेनम उत्पादनमा सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्रको समेत सहयोग लिन सकिने मरासिनीले बताए ।
‘बर्सेनि विष प्रतिरोधकको अभावसँग जुध्नुभन्दा सरकारले उत्पादन थालेर दिगो समाधान खोज्नुपर्छ,’ इपिडिमियोलजिस्ट डा. मानसकुमार बनर्जीले भने, ‘मागको दाँजोमा उत्पादनमा कमीले भारतले आफ्नै लागि समेत उत्पादन पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । त्यसैले भेनमको अभाव आगामी दिनमा अझ बढी मात्रामा देखिने छ ।’ भारतमा सरकारले नै भेनम उत्पादन गर्छ ।
मुलुकमा बर्सेनि करिब ३० हजार भाइल भेनम आवश्यक हुन्छ । गर्मीयाममा ४५ वर्षमुनिका व्यक्ति बढी मात्रामा सर्पदंशको चपेटामा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । एक जनामा पोली भेलेन्ट एन्टिस्नेक भेनम -चार थरीको विषालु सर्पका लागि दिइने एउटै विष प्रतिरोधक) को औसत आवश्यकता १६ भाइलसम्म हुन्छ । यो विष प्रतिरोधकको एक जनामा अधिकतम उपयोग ३० भाइलसम्म हुने गर्छ । विश्वभर ३ हजार ४ सय प्रजातिका सर्प भए पनि हामीकहाँ करिब ८९ प्रजाति पाइएको तथ्यांक छ । यसमध्ये करिब १७ प्रजातिका सर्प खतरनाक मानिन्छन् ।